အားကစားမြက်, အားကစား Turf, သောဒုံမြက်ခင်း Mat - Wanhe
Wanhe Grass သည်အဆင့်မြင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး R&D၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရောင်းချမှုများကိုပေါင်းစပ်ထားပြီးမြက်မြက်ခင်းပြင်တွင်ကောင်းမွန်သောအမှတ်တံဆိပ် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူနှင့်ထုတ်လုပ်ရန်ကတိကဝတ်ပြုခဲ့သည်။ Huai'an Wanhe စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်သည်လှပသောရှုခင်းများနှင့်အတူပေကျင်း - ဟန်ကျိုး Grand Canal ၏ဘဏ်တွင်တည်ရှိသည်။ ၎င်းသည်ဇာကျူပြည်နယ်၊ Huai'an မြို့၏လူမျိုးကြီးဖြစ်သော Zhou Enlai ၏ဇာတိမြို့ဖြစ်သည်။ Xinchang မီးရထားနှင့်ပီကင်း - ရှန်ဟိုင်းအမြန်လမ်းမကြီးသည်မြို့ကိုဖြတ်ပြီးအဆင်ပြေစွာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြစ်သည်။ အဓိကထုတ်ကုန်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်စက်ရုံမှအားကစားမြက်နှင့်ရှုခင်းမြက်နှင့်အခြားထုတ်ကုန်များဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၂၀ အတွင်းလက်လီရောင်းချသူများနှင့်အေးဂျင့်များနှင့်ရေရှည်တည်တံ့သောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ပို့ကုန်စုစုပေါင်းရောင်းအား၏ ၈၀% ကျော်ရှိသည်။
ဂေါက်သီးကစားခြင်းအတွက် Wanhe Grass ရှုခင်းကိုအစစ်အမှန်အစိမ်းရောင်အတွေ့အကြုံနှင့်အညီဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပြီးထုတ်လုပ်မှုပုံစံနှင့်မျက်နှာပြင်အသွင်အပြင်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်။ မရနိုင်ပါ။ ၎င်း၏ပြီးပြည့်စုံသောချောချောမွေ့မွေ့သည်တိကျသောဘောလုံးလိပ်ကိုအာမခံပေးပြီး၎င်းကိုကစားနေစဉ်ကြည်နူးဖွယ်နှစ်သိမ့်မှုပေးသည်။
Wanhe Grass ၏အားကစားများစွာအတွက်အတုအလှည့်ဖန်တီးမှုအတွေ့အကြုံကကျွန်ုပ်တို့ဘက်စုံသုံးအသုံးပြုရန်အတွက်အဆင့်မြင့်စွမ်းဆောင်ရည်များဖြစ်သော ၁၁ ဘက်နှင့် ၇ ဘက်ဘောလုံးဘောလုံး၊ ဘောလုံးနှင့်ဟော်ကီကွင်း၊ ဘောလုံးနှင့်ရပ်ဘီကွင်းကဲ့သို့သောအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များကိုပေးသည်။ ။
စားသုံးသူများက Chain Stores (သို့) DIY စတိုးများထံမှအတုမြက်များကို ၀ ယ်သူပိုများလာတယ်။ ၎င်းသည်လူများကို DIY ပြုလုပ်ရန်အတွက်ပူပြင်းသည့်ရောင်းကုန်သစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Wanhe Grass Landscape သည်လူသိများသော Chain စတိုးဆိုင်အချို့သို့ ၀ င်ရောက်ခဲ့ပြီး၊ အမျိုးမျိုးသောလမ်းကြောင်းများဖြင့်ကွင်းဆက်စတိုးဆိုင်များကိုထောက်ပံ့ပေးသည့်အတွေ့အကြုံနှင့်ပြည့်လျှံသည်။ roll 2X25m, roll 1x4m, mat 1X1m, pad 30X30cm ။
ယူကေ - ဒေးဗစ်
ငါ Wanhe နှင့်အတူ5နှစ်မြက်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြသည်။ ဒါဟာတကယ့်မြက်ပင်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုကျွန်ုပ်၏ရှုခင်းများစီမံကိန်းများအတွက်အသုံးပြုသည်။ နောက်ဆုံးအသုံးပြုသူထံမှကောင်းမွန်သောတုံ့ပြန်ချက်ရရှိပြီး၊ စီးပွားရေးနှင့်အောင်မြင်မှုရရှိသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Wanhe Grass Team.I သည်ဤထုတ်ကုန်အားကျွန်ုပ်အကြံပြုလိုပါသည်။
ထိုင်း - ယင်လပ်
သင်ဝယ်ယူရန်စဉ်းစားနေပါကသင်သည်စိတ်ပျက်စရာမရှိပါ။ ၎င်းသည်မြက်ပိုပြည့်ပြီးကြာရှည်စွာအသုံးပြုသောမြက်ပင်အစစ်အမှန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းသောစျေးနှုန်းအတွက်ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။
ချီလီ - ဟိုဆေး uiz Picasso
အလွန်အကြမ်းခံခြင်းနှင့်ကောင်းစွာလုပ်။ သရုပ်မှန်ကိုထည့်သွင်းရန်အလွန်ကွဲပြားသောရိုက်သည့်မျက်နှာပြင်နှစ်ခုရှိသည်။ ထိပ်တန်းအရည်အသွေး! ထုတ်လုပ်သူကောင်း! အားလုံးထုတ်ကုန်နှင့်အတူအဘယ်သူမျှမကိစ္စများ။ ဒါကငါရှာဖွေနေခဲ့သည်ရုံ။ ငါ၏အကလပ်များအတွက်စုံလင်သောအရွယ်အစား။
မက္ကစီကို - အန်တိုနီယို
စူပါအကြံပြုထုတ်လုပ်သူ! အစာရှောင်ခြင်းပေးပို့။ ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးသည်မြက်ပင်သည်နူးညံ့ပြီးအစစ်အမှန်ဖြစ်သည်။ packet ကိုပစ္စည်းလည်းအလွန်ကောင်းလှ၏။ ၎င်းတို့တွင်ထိပ်တန်းအရည်အသွေးရှိပြီးထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အတွက်မှတ်ပုံတင်ထားသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်အမြဲတမ်းအဖြေတစ်ခုပေးနိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိထားကြသည်။ သူတို့ရဲ့ဝန်အဖွဲ့နှင့်ရောင်းအားသည်အလွန်ကျွမ်းကျင်သည်။ အကြံပြုပါသည်
ဂျပန် - なかだ
ရှုခင်းအတွက် Professional ကအတုအစိမ်းရောင်ကော်ဇောမြက်။ ရောင်းသူသည်အလွန်ကျွမ်းကျင်ပြီးမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များကိုချက်ချင်းတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးသည်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကို ဦး စားပေးပုံရသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤရောင်းချသူနှင့်နောင်အနာဂတ်တွင်စီးပွားရေးလုပ်ရန်အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။
အမေရိကန် - Garret
အလွန်ကောင်းသောအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်အလွန်ဖော်ရွေဝန်ဆောင်မှု, အလွန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုမ္ပဏီ။ Wanhe Grass ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Clients များပြောဆိုရာ
Astro Turf ဘောလုံးကွင်း, Landscaping များအတွက် Landscaping မြက်, ဘောလုံး Turf Grass, အတုမြက်ခင်း, အတုမြက်ကော်ဇော, အတုဂေါက်သီးမြက်,